रोनाल्डोले फेरी ह्याट्रीक गरे! | पहिलो बोली
रोनाल्डोले फेरी ह्याट्रीक गरे!
Published on: Tuesday January 7, 2020 (1 year ago)
एजेन्सी – फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोको ह्याट्रिकसँगै इटालियन सिरी ए अन्तर्गत सोमबारको खेलमा युभेन्टसले काग्लियारीमाथि ४-० को फराकिलो जित दर्ता गरेको छ ।निकै प्रतिस्पर्धात्मक रहेको पहिलो हाफमा युभेन्टसले अवसर पाएपनि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन । दोस्रो हाफमा भने घरेलु टोलीले ४ गोल गर्दै जित हासिल गर्यो । रोनाल्डोले खेलको ४९ औं मिनेटमा गोल गर्दै युभेन्टसलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
रोनाल्डोले नै ६७ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै युभेन्टसको अग्रता दोब्बर पारे । ८१ औं मिनेटमा रोनाल्डोको पासमा अर्जेन्टिनी फरवार्ड गोन्जालो हिगुआइनले गोल गर्दै ३-० ले अगाडी बढाए । लगत्तै रोनाल्डोले डग्लस कोस्टाको पासमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे ।
रोनाल्डोले पछिल्लो वर्षको लयलाई नयाँ वर्षमा पनि कायम राखेका छन् । उनले पछिल्लो ५ खेलमा ९ गोल गर्दै सिजनको सुरुवातमा कमजोर रहेको गोलसंख्या मजबुत बनाएका छन् ।
यस जितसँगै युभेन्टस अंक तालिकाको शीर्षस्थानमा उक्लिएको छ । युभेन्टसले १८ खेलमा ४५ अंक जोडेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको इन्टरको ४२ अंक छ । इन्टरले आज राति हुने खेलमा नेपोलीको सामना गर्नेछ । इन्टर जित हासिल गर्न नसकेमा युभेन्टस नै लिगको शीर्षस्थानमा कायम रहनेछ ।यसगरी इटालियन लिगमा फर्किएका फरवार्ड ज्लाटन इब्रहिमोभिचको जादु भने पहिलो खेलमा चल्न सकेन । एसी मिलान घरेलु मैदानमा साम्पडोरियासँग गोलरहित बराबरीमा रोकिँदा इब्राले गोल गर्न सकेनन् । उनी खेलको दोस्रो हाफमा क्रिस्टोफ पियातेकको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका थिए ।
एसी मिलान अंक तालिकाको ११ औं स्थानमा रहेको छ । मिलानले १८ खेलमा २२ अंक मात्र जोडेको छ । मिलान युरोपेली प्रतियोगिता खेल्ने कम्तिमा छैटौं स्थानभन्दा ७ अंकले पछाडी छ ।-साभार-हाम्रो खेलकुद